WOWOW Black 4 Hole Centerset Buundada Vintage Farmhouse Jikada weelka weelka leh ee buufiska dhinaca
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Rustic Bridge Jikada / WOWOW Black 4 Hole Centerset Bridge Vintage Farm House
[Daryeelka CaafimaadkaagaTubooyinka buundada culus waxay ka samaysan tahay naxaas adag oo qaali ah, aan miridhku ahayn, aan nabaad guur ahayn. Tayada biyaha waxaa dammaanad qaadaya farsamooyin gaar ah oo looga hortagayo rasaasta iyo qolofka, taas oo faa'iido u leh qaab nololeed caafimaad leh.
[Fududeynta noloshaada】 Hal riix oo badhan ah, buufiyaha dhinaca naxaasta cadaadiska sareyso ku buufin kara durdur biyo xoog leh si loo nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska. Tuubada lagu daray waxaa loo soo jiidi karaa ilaa 59 inji, taas oo ay fududahay in la nadiifiyo meel kasta oo hareeraha saxanka ah.
[Rakibaadda Easy】 Tubada jikada ee naxaasta qadiimiga ah ayaa ah wax aad u qurux badan oo lagu daro jikada. Tubada jikada Vintage waxay la socotaa dhammaan qalabyada lagama maarmaanka ah iyo tilmaamaha isticmaalaha, taas oo ka dhigaysa rakibidda mid sahlan 30 daqiiqo.
SKU: 23115A1B Categories: Buundada Rustic Bridge Jikada, Qubeyska jikada
17.48 x 13.27 x 2.87 inji
Tubado jikada oo leh buufiye dhinac, tuubooyinka biyaha, qalabka wax lagu dhejiyo